Qiso Gaaban Oo Cajiib Ah Ku cibro Qaado Gabadhan Waxa Aay Sameysay..!! - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Qiso Gaaban Oo Cajiib Ah Ku cibro Qaado Gabadhan Waxa Aay Sameysay..!!
Published: January 5, 2017, 8:32 pm
Maalin kasta Qoyskeeda waxey u Diyaarin jirtay Quraacda Subxanimo. Maalin ayey sameysay Xabado Rooti dheeraad ah. waxey saartay Dariishadda Gurigeed si uu Miskiin baahan uga qaato. Sidaasi ayey markii dambe Caado ka dhigatay maalin kasta. Laakiin maalin kasta waxaa qaadan jiray Miskiin aad u baahan oo Tuur lahaa.
Haddaba, Markuu qaato ayuu haddana Erayo aan Wanaagsaneyn Oran jiray. Gabadha ayaa aad u Dhibsatay Hadalada Xun ee Ninkan ay Macruufka u sameysay uu leeyahay. Maalintii dambe waxey Go’aansatay iney Sun u mariso si uu u Dhinto. Rootigii ayey Sun u marisay laakiin markey is tiri saar Dariishada ayey haddana Xusuusatay Allaah oo Towbada keentay oo ay Rootidii Sunta lahayd Gubtay. Ka dibna ay u saartay mid aad uga Wanaagsan tii ay hore ugu dhigi jirtay, iyadoo ka Muroogneysa waxa ay sameysay, Waxaana jiray Wiil ay dhashay oo maqnaa oo ay ugu Murgoon jirtay si weyn.
Maalintii ay sidaasi sameysay ayaa Galabnimadii la soo garaacay Albaabkii Gurigeed. Markey Furtay waxey la kulantay Wiilkeedii maqanaa oo hortaagan Albaabka oo ay ka muuqato Diif aad u daran laakiin Rooti Gacanta ku heysta, Gaajada heysa awgeed, wuxuuna ku yiri:- Haddii Hooyo aanu Nin Miskiin ah oo Tuur lihi i siin Rootigaan maba aan soo gaari laheyn halkan, Wey Dhadhimisay mise waa tii ay Diyaarisay iyada. Waxey Xusuusatay in haddii ay u dhigi lahayd Suntii uu Wiilkeedu noqon lahaa kan Cuna ee ku dhinta.
(Weligaa Wanaagga ka Shaqee oo Iska ilaali Dhibka aad u guys any sid Walaalkaaga, maxaa yeelay Dhibaatadaa aad u geysaneyso Qofkaas Ogoow ilaah inuu ku Arko, waxaana laga yaabaa Dhibaatada aad la Raadineysid Walaalkaaga iney Adiga kugu soo laabato).
(ALOOW WADDADA XAQA NA TUS).
Tallooyin Muhiim Ah Qofkii Ku Dhaqmaa U Horseedi Karo Farxad Aan Dhamaan…
Habeen iyada oo Xaaskeygu Hurudo ayaan jaleecay Xageeda waxaan ka Fekeray qaabka Nolosheeda iyadoo Huruda